“छोरीहरूलाई सन्देश” | Himal Times
Home विचार/अन्तर्वार्ता “छोरीहरूलाई सन्देश”
फेब्रुअरी १४ मा भ्यालेण्टाइन दिवस रे.! कुनै बिदेशी प्रेम गरेको अभियोगमा काटिए रे कुनै समयमा.! अब तिनै बिदेशीका नाममा अहिले हाम्रो देशमा पनि भ्यालेण्टाइन दिवस मनाइरहेका छन् हाम्रा छोरीचेलीहरू.!
नानीहरू.! प्रेम गर्नु नराम्रो होइन.! अहिले तिमीहरूले गरेको प्रेम वास्तविक प्रेम हो कि होइन बुझ्नु जरूरी छ।बर्षमा एक दिन एक थुँगा गुलाफको फूल हातमा थमाउँदैमा प्रेम गरेको हुन्छ र?
तिमीहरूलाई सेण्ट भ्यालेण्टाइनको नाम, जन्ममिति कण्ठ छ.! जुन केटीको नाममा उनी मारिए, त्यो केटीको नाम के हो? भ्यालेण्टाइन मारिएपछि उनको जीवन कस्तो भयो? यी सबै कुरा थाहा छ त तिमीहरूलाई? छैन.! यसरी सतही रूपमा पश्चिमा क्रिष्चियनहरूले फैलाएको हौवामा तिमीहरु लागिरहेका छौ तिमीहरु.!
तिमीहरूले मारिया क्यूरी, फ्लोरेन्स् नाइटिंगेल,मदर टेरेसाहरूको नाम सुनेका छौ? उनीहरु दीनदु:खीहरूका प्रेमी थिए.! संसारले अहिले पनि उनीहरुलाई संझन्छन्.!
पारिजात, वानीरा गिरी, झमक घिमिरे, शारदा शर्माहरूलाई चिनेका छौ? आफ्ना राम्रा कर्मले गर्दा हामी उनीहरूलाई मायाँ गर्छौँ.!
प्यारा छोराछोरीहरू- हाम्रै पुराणहरूमा सावित्री र सत्यवानको प्रेम, भगवान शिव र सतीदेवीका प्रेमप्रशंगहरू तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन? यस्ता पौराणिकतामा आधारित प्रेमकथाहरू पनि त छन् नि.! यस्ता कुराहरूबाट तिमीहरूले पाठ सिक्नु पर्छ.!
संसार प्रेममै अडिएको छ। प्रेम गर्नु भनेको मायाँ गर्नु हो.! आमा-बाले छोराछोरीहरूसँग गर्ने प्रेम, दाजुभाइ र दिदीबहिनीको माया प्रेम निःस्वार्थ प्रेम हो.! एउटा मान्छेले अन्य प्राणीहरूसँग गर्ने प्रेम मानवीयता हो, करूणा हो.!
नानीहरू.! अहिले तिमीहरु सानै छौ। यो बेला भनेको कौतुहलताको बेला हो। अहिले संचारमा भएको क्रान्तिका कारणले तिमीहरूको पहुँच विश्वसँग छ। संजालमा जे सोच्यो त्यहि छ। त्यहाँ सबै राम्रा कुराहरु छन्.! केही नराम्रा कुरा पनि छन्। हामीले त्यहाँ भएका राम्रा कुराहरू छानेर त्यसको अनुशरण गर्नु पर्छ.! प्रेम के हो? मानवियता के हो सबै कुरा त्यहाँ हेर्न पाइन्छ। त्यो भन्दा बढी आमा-बासँग सिक्दा छर्लंग हुन सकिन्छ।
आमा-बा..! हाम्रो पहिलो पाठशाला आमा हुन्.! त्यसपछि बा.! वहाँहरूको प्रत्येक सासमा प्रेम छ.! प्रत्येक गालीमा, प्रत्येक लवेटामा मायाँ छ.! तिमीहरू हाँस्दा आमा पनि आफ्नो थोते दाँत देखाएर खिल्खिलाउँछिन्; तिमीहरूको अनुहार मलिनो हुँदा आमाबाको आँखाबाट झरी बर्षिन्छ.! तिम्रा र आमा-बाका आँखाबाट झर्ने प्रत्येक ढिकामा मायाँ नै मायाँ छ। आँखा चिम्म गरेर अहिल्यै आमा-बा संझ त.!
प्रेम र शारीरिक वास्ना
अहिले तिमीहरूले गर्ने गरेका र भन्ने गरेका प्रेम ९९ % शारीरिक वास्नामा आधारित छ.! जब तिमी २२/२३ बर्षका हुन्छौ, बल्ल तिमीहरूले बुझ्छौ कि शारीरिक वास्ना के हो? जीवन के हो? अहिले तिमीलाई मरिमेट्ने तिम्रा प्रेमीहरू शारीरिक वास्ना आतुर छन् तर तिमीहरू यसैलाई प्रेम भन्छौ.!
शारीरिक वास्ना एउटा नितान्त सन्तानोत्पादनका लागि अपरिहार्य जीववैज्ञानिक आवश्यकता हो.! यो बिवाहपश्चात् गरिने शुभ कर्म हो.! यो नहुँदा श्रृष्टि रोकिन्छ.! त्यसैले नानी-बाबूहरूमा म एउटी आमाको अनुरोध छ कि बिवाहअगाडिको यौनसम्बन्ध कदापि हुनुहुँदैन।यो जीवनकालागि अभिशाप हुनेछ केटीहरूकालागि.! क्षणिक आवेग र भुलभुलैयामा लाग्दा जीवन घरको न घाटको भएका कैयौँ उदाहरण तिम्रोहाम्रो गाउँ-टोलमा छ्याप्छ्याप्ति छन्, यसो याद गर त.!
पश्चिमाहरूको बैवाहिक जीवन सतप्रतिशत सफल छैन। किन थाहा छ? उनीहरू बिवाहअघिको प्रेममा बिस्वाश गर्छन्.! सानो कुरामा बिवाद हुन्छ, डिभोर्स हुन्छ.! हाम्रोमा चाहिँ बिवाहपछि प्रेम हुन्छ, एक-अर्काको सामान्य कमजोरीलाई वास्ता गरिन्न अनि सम्बन्ध जीवन्त हुन्छ.! यसको अर्थ प्रेमबिवाह नराम्रो भनेको होइन, तर यसलाई सामाजिक बिवाहमा परिणत गर्न नितान्त जरूरी छ.!
हामी सबै सधैँ अरूसँग मायाँ, सद्भाव साट्छौँ र त हाम्रो घर, समाज प्रेमील छ। त्यसैले हाम्रा प्रत्येक सासमा प्रेम छ , सद्भाव छ.! यो एकदिने प्रेमदिवस मनाएर मायाँ ( शारीरिक वास्ना साट्ने) हो र.! मायाँ-प्रेमलाई एकदिनमा सीमित नबनाऔँ भन्ने आग्रह हो एउटी आमाको.!
हामीले हाम्रा पुर्खाले गरेका , छोडेर गएका राम्रा संस्कारहरू जीवन्त राख्नु पर्छ.! नराम्रो छ भने संशोधन गर्दै जानुपर्छ भनेर कालिदाशले उहिल्यै भनेका हुन्.!
(यो मैले विशेष गरी छोरीहरूलाई लक्षित गरी लेखेकी हुँ.! यो कसैप्रति लक्षित होइन, सबै नानीहरूप्रति लक्षित छ.! प्रेम अति उच्चस्तरको गरिमामय शब्द हो। यसलाई शारीरिक वास्नासंग जोडेर जीवन नबिगारौँ.! सबै बाबू-नानीहरूमा मेरो हार्दिक मायाँ छ.! मेरो कुरा नराम्रो लागेमा म्यासेन्जरमा टिप्पणी गर्नू.! राम्रो लागेमा म खुशी भएँ.! आजलाई बिदा है त.! )
Previous articleभागरथी घटनाका अभियुक्त पक्राउपछि डीआईजी सुवेदीले भने, “निर्मलालाइ पनि छिट्टै न्याय मिल्छ”
Next articleविद्यार्थीद्धारा थाल ठटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धिको विरोध